Is-kululeeyaha gacmaha jilibka
Nooca La Kordhiyey ee Unisex Jilbaha Is-kululeeyaha Isku-hagaajin Kara Magnetic Tourmaline Therapy Jilibka Taageerada Brace Difaaca Arthritis Xanuunka Gargaarka Jiont Caafimaadka Daryeelka
Suunka taageerada laastikada ee la neefsan karo
Waxay ka samaysan tahay spandex iyo cudbi, suunka caloosha iyo hagaajinta qalliinka ka dib.
Naqshadeynta naqshadeynta taageerada jilibka
Waxay ka samaysan tahay maro isku dhafan, chuck hagaajin kara iyo qaab daawaha ah. Ku habboon jabka jilibka iyo arthritis, iwm.
Curcurka xanuunku wuxuu taageeraa curcurka gacanta
Alaabtaan waxaa loo isticmaalaa murgacashada curcurka, cilladda tunnel tunnel syndrome; murqaha suulka ama jabka, curcurka arthritis-ka iyo kala-goysyada kala-goysyada, iwm.
Neefsashada ka shaqeyso caynka taageerada dhexda
Taageerada dhexda waxay ku leedahay bir bir ah dhinaca dambe iyo mesh mesh, waxay siisaa taageero iyo ilaalinta dhexda.
Isbuunyo cufan oo cufan oo afka ilmagaleenka midab leh
Qoorta qoorta ah waxaa laga sameeyay isbuunyo cufan, jilicsan oo laastik ah.
Naqshadeynta naqshadeynta sare ee xargaha taageerada taageerada dhexda
Qalabkan dhexda ayaa qaatay naqshad xarig jiido ah, taas oo koontarooleysa dhammaan dhexda iyo saxanka taageerada dhabarka si lookala baxo. Qaab dhismeedka dhabarku wuxuu u dhigmaa ergonomics si loo gaaro saameyn raaxo leh; dhabarka waxaa ku jira suuf qaro weyn oo la saari karo.
Mesh maro miskaha taageerista dhexda neefta
Xariggan dhexda ayaa laga sameeyay maro mesh, waa mid aad u neefsan kara oo jilicsan.
Cirifka taageerida dhexda ee laastikada iyo neefsashada
Suunka taageerada dhexda waxaa loo adeegsadaa lumbar vertebra hyperplasia iyo ilaalinta lumbar.
Faashadda hagaajinta feeraha caafimaadka
Badeecaddu waxay ku habboon tahay faashad iyo hagaajin.